वान डे अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा दश हजार रन
११ माघ २०७७, आइतवार | Jan 24, 2021 | 11:02:32
By synergyfm on	 October 25, 2018 खेलकुद
क्रिकेटको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय फर्म्याटको पहिलो खेल १९७१ जनवरी ५ मा अष्ट्रेलिया र इङ्गल्याण्ड बीच मेलबर्नमा भएको थियो । त्यसयता ४ हजार ६० वटा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेलिएका छन् । यद्यपि यो प्रारूपको खेलमा १३ जना ब्याट्सम्यानले मात्रै १० हजार रनको आँकडा छुन सकेका छन् । वेष्ट इन्डिज विरुद्धको विशाखापट्नम एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा शतकीय पारी खेल्ने क्रममा विराट कोहली सबैभन्दा कान्छा १० हजार रन पुरा गर्ने खेलाडी बनेका छन् । यो फर्म्याटमा १० हजार रन पुरा गर्ने ब्याट्सम्यानहरूको सूची यस्तो छ :
१. सचिन तेन्दुलकर (भारत) : ‘लिटिल मास्टर’ उपनामले चिनिने भारतीय दायाँ हाते ब्याट्सम्यान सचिन तेन्दुलकरले ओडीआई इतिहासमा पहिलो पटक १० हजार रन पार गरेका हुन् । १६ वर्षको उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रवेश गरेका उनले २००१ मार्च ३१ मा अष्ट्रेलियाविरुद्ध खेल्दै सो उपलब्धि हासिल गरेका हुन् । तेन्दुलकरले १० हजार रन २५९ पारी (११ वर्ष १०३ दिन) खेलेर पु¥याएका थिए । उनीसँग सबैभन्दा छिटो ११ हजार देखि १८ हजार पुरा गरेको कीर्तिमान् रहेको छ । उनले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ४६३ खेल खेलेर १८,४२६ रन बनाएका छन् जुन ओडीआई इतिहासमा कुनै पनि ब्याट्सम्यानले बनाएको धेरै रन हो ।
२. इन्जमाम उल हक (पाकिस्तान) : पाकिस्तानी ब्याट्सम्यान इन्जमामले २००४ सेप्टेम्बर १९ मा भारतविरुद्ध खेल्दै यो आँकडा पुरा गरेका हुन् । १० हजार रन पुरा गर्न उनले ३२८ पारी (१५ वर्ष २२६ दिन) कुर्नुपरेको थियो । १० हजार रन पुरा गर्न धेरै पारी खेल्नेको सूचीमा उनी दोश्रो स्थानमा पर्छन् । इन्जमामले पाकिस्तानबाट खेल्दै ३७८ खेलमा ११,३७३ रन बनाएका छन् ।
३. सौरभ गांगुली (भारत/एसिया) : सौरभ गांगुली १० हजार रन पुरा गर्ने विश्वको तेश्रो तथा दोश्रो भारतीय ब्याट्सम्यान हुन् । उनले यो उपलब्धि २००५ अगष्ट ३ मा श्रीलंका विरुद्ध खेल्दै हासिल गरेका हुन् । त्यो समयसम्म उनले २६३ ओडीआई पारी (१३ वर्ष २०४ दिन) खेलेका थिए । उनी एसिया ११ को तर्फबाट पनि एकदिवसीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलमा उत्रिएका थिए । उनले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ३११ खेल खेलेर ११,३६३ रन बनाएका छन् ।
४. सनथ जयसुर्या (श्रीलंका/एसिया) : बायाँ हाते ब्याट्सम्यान जयसुर्या १० हजार रन पुरा गर्ने पहिलो श्रीलंकाली हुन् । यी ओपनर ब्याट्सम्यानले २००५ अगष्ट ९ मा भारत विरुद्ध खेल्दै दश हजार रन पुरा गरेका हुन् । त्यो समयसम्म उनले ३२८ ओडीआई पारी (१५ वर्ष २२६ दिन) खेलेका थिए । उनी एसिया ११ को तर्फबाट पनि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा उत्रिएका थिए । उनले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ४४५ खेल खेलेर १३,४३० रन बनाएका छन् ।
५. ब्रायन लारा (वेष्ट इण्डिज/आइसीसी) : १० हजार रन पुरा गर्ने ब्रायन लारा पाँचौं ब्याट्सम्यान हुन् । उनले २००६ डिसेम्बर १६ मा पाकिस्तान विरुद्ध खेल्दै यो आँकडा पार गरेका हुन् । दश हजार रन पुरा गर्न उनले २७८ ओडीआई पारी (१६ वर्ष ३७ दिन) खेलेका थिए । उनले आइसीसी ११ को तर्फबाट पनि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका छन् । टेष्ट क्रिकेटको एउटा पारीमा ४०० नट आउट रन बनाएका उनले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा २९९ खेल खेलेर १०,४०५ रन बनाएका छन् ।
६. राहुल द्रविड (भारत/एसिया ११/आइसीसी ११) : ‘दि वाल’ उपनामले चिनिने राहुल द्रविड १० हजार रन पुरा गर्ने विश्वका छैठौं तथा तेश्रो भारतीय ब्याट्सम्यान हुन् । उनले २००७ फेब्रुअरी १४ मा श्रीलंका विरुद्ध खेल्दै यो आँकडा पार गरेका हुन् । दश हजार रन पुरा गर्न उनले २८७ ओडीआई पारी (१० वर्ष ३१७ दिन) लगाएका थिए । उनले आइसीसी ११ र एसिया ११ को तर्फबाट पनि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका छन् । उनले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ३४४ खेल खेलेर १०,८८९ रन बनाएका छन् ।
७. रिकी पोन्टिङ (अष्ट्रेलिया/आइसीसी ११) : मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान रिकी पोन्टिङ १० हजार रन पुरा गर्ने विश्वका सातौं तथा एक मात्र अष्ट्रेलियन ब्याट्सम्यान हुन् । उनले २००७ मार्च २४ मा दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध यो आँकडा पार गरेका हुन् । दश हजार रन पुरा गर्न उनले २६६ ओडीआई पारी (१२ वर्ष ३७ दिन) खर्चिएका थिए । उनले आइसीसी ११ को तर्फबाट पनि खेल्दै कूल ३७५ खेलमा १३,७०४ रन बनाएका छन् ।
८. जैक्स क्यालिस (दक्षिण अफ्रिका/अफ्रिका ११/आइसीसी ११) : दक्षिण अफ्रिकाका जैक्स क्यालिस १० हजार रन पुरा गर्ने विश्वका आठौंं तथा एक मात्र दक्षिण अफ्रिकी ब्याट्सम्यान हुन् । उनले २००९ जनवरी २३ मा अष्ट्रेलिया विरुद्धको खेलमा यो आँकडा पार गरेका हुन् । दश हजार रन पुरा गर्न उनले २७२ पारी (१३ वर्ष १४ दिन) लगाएका थिए । उनले अफ्रिका ११ तथा आइसीसी ११ को तर्फबाट पनि खेल्दै ३२८ खेलमा ११,५७९ रन बनाएका छन् ।
९. माहेला जयवर्दने (श्रीलंका/एसिया ११) : माहेला जयवर्दने १० हजार रन पुरा गर्ने विश्वका नवौं तथा दोश्रा श्रीलंकाली ब्याट्सम्यान हुन् । उनले २०११ नोवेम्वर १८ मा पाकिस्तान विरुद्ध खेल्दै यो आँकडा छोएका हुन् । दश हजार रन पुरा गर्न उनले सबैभन्दा धेरै ३३३ पारी (१३ वर्ष २९८ दिन) खेलेका छन् । कप्तानको समेत भूमिका निभाएका उनले एसिया ११ को तर्फबाट पनि खेल्दै ४४८ खेलमा १२,६५० रन बनाएका छन् ।
१०. कुमारा संगकारा (श्रीलंका/एसिया ११/आइसीसी ११) : १० हजार रन पुरा गर्ने विश्वका दशौं तथा तेश्रो श्रीलंकाली ब्याट्सम्यान हुन् – कुमारा संगकारा । उनले २०१२ फेब्रुअरी १७ मा अष्टे«लिया विरुद्ध खेल्दै यो आँकडा छोएका हुन् । दश हजार रन पुरा गर्न उनले २९६ पारी (११ वर्ष २२७ दिन) लगाएका थिए । २०११ को वानडे विश्वकपमा श्रीलंकाको कप्तान रहेका उनले आफ्नो टिमलाई फाइनलसम्म पु¥याएका थिए । एसिया ११ र आइसीसी ११ को तर्फबाट पनि खेल्दै उनले ४०४ खेलमा १४,२३४ रन बनाएका छन् ।
११. तिलकरत्ने दिल्सान (श्रीलंका) : दिल्सान दश हजार रन पुरा गर्ने विश्वका एघारौं तथा चौथा श्रीलंकाली ब्याट्सम्यान हुन् । आक्रमक शैलीमा खेल्न रुचाउने उनले २०१५ जुलाई २६ मा पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा सो आँकडा छोएका हुन् । दश हजार रन पुरा गर्न उनले २९३ पारी (१५ वर्ष २२७ दिन) लगाएका थिए । श्रीलंकाका लागि उनले ३३० खेलमा १०,२९० रन बनाएका छन् ।
१२. महेन्द्र सिंह धोनी (भारत/एसिया ११) : २०१८ जुलाई १४ मा इङ्गल्याण्ड विरुद्घ ब्याटिङ गर्ने क्रममा धोनी १० हजार रन पुरा गर्ने चौथो भारतीय तथा समग्रमा बाह्रौं खेलाडी बनेका हुन् । राम्रो फिनिसरका रूपमा स्थापित भएका उनी ब्याटिङ क्रममा पुच्छरतिर आउने गरेका छन् । एसिया ११ बाट पनि खेलेका उनले दश हजार रन पुरा गर्न २७३ पारी (१३ वर्ष २०३ दिन) लगाएका थिए । भारतीय टिमका पहिलो रोजाइका विकेटकिपर धोनीकै कप्तानीमा भारतले २८ वर्षपछि २०११ मा वानडे विश्वकप जितेको थियो । उनले यो मितिसम्म आइपुग्दा ३२९ खेलमा १०,१३४ रन बनाएका छन् ।
१३. विराट कोहली (भारत) : भारतीय टिमका हालका कप्तान विराट कोहली ओडीआई इतिहासमा सबैभन्दा छिटो १० हजार रन पार गर्ने खेलाडी भएका छन् । २०१८ अक्टोबर २४ मा वेष्ट इण्डिजविरुद्ध खेल्दै सो उपलब्धि हासिल गरेका हुन् । कोहलीले १० हजार रन सबैभन्दा कम २०५ पारी (१० वर्ष ६७ दिन) खेलेर पु¥याएका हुन् । उनीसँग सबैभन्दा छिटो ९ हजार रन पुरा गरेको कीर्तिमान् पनि रहेको छ । उनले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा अहिलेसम्म २१३ खेल खेलेर १०,०७६ रन बनाएका छन् ।